Sida loo helo daaqadii hore "Abuur dukumiinti" Photoshop CC 2017 | Abuurista khadka tooska ah
Haddii aad seegto daaqaddii hore ee "dokumentiga cusub" ee ku yaal Photoshop CC 2017, waxaa jira xal
25-kii sano ee la soo dhaafay waxaa daaqad ka furan Adobe Photoshop taas ayaa ku hadhay waqtiga ma guurto ah, si sax ah tan "dukumiinti cusub" taasna waxay u fureysaa waddo dhammaan hal-abuurkaas, dib-u-hagaajinta iyo wax-soo-saarka kale ee aan awoodnay inaan ku sameyno qalabkan qaabeynta weyn.
Laakiin waa gudaha Adobe Photoshop CC 2017 halkaas oo tan ay isku bedeshay lama filaan dad badan oo looga bartay daaqadan. Waxaa jira dad badan oo si furan u dhaleeceynaya Adobe cusbooneysiinta daaqadan, iyo in ka badan markii ay ahayd mid joogto ah oo shaqeyneysa, laakiin sida wax walba oo nolosha ah waxay u baahan tahay in la cusbooneysiiyo Taasi waa sababta, haddii aadan jeclayn daaqadda cusub, waxaa jira dariiq lagu soo kabto kii hore.
Maxaad dhihi laheyd, Haddii uusan jabin, ha hagaajin. Sharcigan, oo loo isticmaalo waxyaabo badan oo nolosha ah, ugu dambayntii looma adeegin ragga ku jira Adobe si ay u cusboonaysiiyaan daaqaddan "dokumentiga furan". Waxaad ka arki kartaa daaqada cusub hoosta:
Isku xirnaan ka kooban cunsurro badan taasna waxay u baahan doontaa xoogaa illaa intaad la qabsanayso sida ku dhacday lambarka sirta ah ee daaqaddaas ahaa 25-kii sano ee la soo dhaafay. Waana daaqadaas cusub waxyaabaha muhiimka ah ay qaateen door labaad.
Haddii aad rabto inaad ku noqoto interface-kii hore ama daaqaddii, kaliya waa inaad aadaa dookhyada tabta guud ee dhinaca bidix. Halkaas, waxaad ka heli kartaa midigta xulasho la yiraahdo «Adeegso dhaxalka «Wajiga cusub ee Dukumintiga»Taasi waa inaad barkinta ka dhigto si aad ugu soo noqoto noloshaada oo dhan, ugu yaraan sida qofku u odhan karo.
Adobe Photoshop in ayaa loo baahan yahay in sanad walba la cusbooneysiiyo iyo in markan ay ahayd cunsur inbadan oo naga mid ah aan ku aqaanay naqshadeynta iyo dib u cusbooneysiinta sawir qaadista. Waxay heleysay horumarin, laakiin markan waa isbeddel aad u wanaagsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Haddii aad seegto daaqaddii hore ee "dokumentiga cusub" ee ku yaal Photoshop CC 2017, waxaa jira xal
Qalabka lagu bilaabayo nashqadeynta